Home Wararka (Deg Deg) Axmed Madoobe oo magacaabay golahiisa Wasiirada
(Deg Deg) Axmed Madoobe oo magacaabay golahiisa Wasiirada
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan ayaa goordhow shaaciyay liiska golaha Wasiirada cusub ee Jubbaland. Liiska ayaa waxaa ka muuqda shaqsiyaad hore oga tirsanaa golaha wasiirada iyo kuwa cusub.
Magacaabidda ayaa imaaneysa xilli lagu wado in uu magaalada Muqdisho ka furmo shirkii loo ballansanaa maalinta berri ah bishana ay tahay 20ka.
Waxaan caawa magacaabay golaha wasiirada cusub ee Jubaland.
Waxaan kalsooni buuxda ku qabaa tayada golaha cusub, kuna hanweynaha in ay shaqadooda si fiican uga soo bixi doonan. pic.twitter.com/tIcCIfIlVM
— Ahmed Sheikh Mohamed Islam (@PresidentMadobe) May 19, 2021 Halka Hoose ka akhriso liiska golaha wasiirada Jubbaland